RIKOODH: Cristiano Ronaldo Oo Barbarreeyey LABA Rikoodh Oo U Yaalay Lionel Messi Iyo Iker Casillas - Laacib
HomeWararka Champions LeagueRIKOODH: Cristiano Ronaldo Oo Barbarreeyey LABA Rikoodh Oo U Yaalay Lionel Messi Iyo Iker Casillas
RIKOODH: Cristiano Ronaldo Oo Barbarreeyey LABA Rikoodh Oo U Yaalay Lionel Messi Iyo Iker Casillas
September 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa barbarreeyey laba rikoodh oo khaas u ahaa halyeygii Real Madrid ee Iker Casillas iyo Lionel Messi kaddib markii uu kusoo bilowday ciyaartii Manchester United iyo Young Boys ee Champions League.
Ronaldo ayaa kulankiisii ugu horreeyey ee Champions League u saftay Manchester United tan iyo 2009 oo ahayd xilligii uu ka tegay, waxaanay u ahayd kulankii 177aad ee tartankan ah ee uu safto, isagoo sidaas ku barbarreeyey rikoodhkii safashada Champions League ee Iker Casillas.
Goolhayaha hore ee reer Spain ayaa muddo ahaa ciyaartoyga kulamadii ugu badnaa ee Champions League ah ciyaaray laakiin waxa hadda rikoodhkaas soo qabtay Cristiano Ronaldo oo wixii ka dambeeya ciyaartan noqon doona ciyaartoyga taariikhda tartankan ugu ciyaarista badan.
Hore waxa uu usoo dhaafay Xavi Hernandez oo kaalinta labaadku jiray isla markaana 151 ciyaarood u saftay Barcelona, waxaana uu usoo gudbay oo uu soo qabtay Casillas oo Real Madrid iyo FC Porto u ciyaaray 177 kulan oo Champions League ah isku-darka waayihiisii oo dhan.
Ronaldo ayaa sidoo kale dhaliyey goolkii madiga ahaa ee Manchester United kulankii guul-darradu kasoo gaadhay ee Young Boys ay 2-1 kaga badisay, waxaanu goolkaasi ahaa midkii 135aad ee uu ka dhaliyo tartankan.
Young Boys ayaa noqotay kooxdii 36aad ee Champions League ay kulmaan ee ee gool ka dhaliyo Ronaldo, waxaanu sidaas ku barbarreeyey rikoodhkii Lionel Messi oo ahaa ciyaartoyga kaliya ee tiro kooxo intaas le’eg ka dhaliyey goolal, waxaana hadda soo qabtay Cristiano Ronaldo oo ay isku mid noqdeen.